Waxa la sheegay in la bilaabi doono mashruuc dhisme geotermaalka(tamarta dhulka) ee tulu moojo oo ka caawinaya sii loo soo saaro tamarta – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in la bilaabi doono mashruuc dhisme geotermaalka(tamarta dhulka) ee tulu moojo oo ka caawinaya sii loo soo saaro tamarta
Tamarta geotarmaalka tulu moogo ayaa ah mashruuc uumiga dhulka hoostiisa si looga soo saaro awooda elektriiga ku caawinaya. Naziif Gemaal oo ah madaxa is gaadhsiinta awooda geotarmaalka ee tulu moojo ayaa sheegay in la qoorsheeyay hawsha dhisida mashrucasi soo saarista awooda.
Neziif Gemaal oo uu waramay wargayska addis maleda ayaa sheegay si loo dhiso mashrucan in hada ka hor laga soo saaray dalab ha’ayadaha dhisi doona. Xiligan xaadirka ahna lagu hawlanyahay qodista ceelasha soo saarista awooda.
Waxa uu Naazi sheegy in sanadki 2020kii tirsiga reer yurub la soo saaray dalabkii ugu horeeyay oo ay ka qayb qaateen todoba ha’ayadood oo caalami ah oo soo saara tarbaayinada ama marawaxadaha oo xiligan xaadirka ahna labo ka mid ahi ha’ayadahaas ay qaateen hawshaasi oo ay sugayaan xiligii ay shaqada bilaabi lahayeen.
Waxa kale oo uu sheegay in ha’ayadiihi ka qayb qaatay dalabka hawshaasi in ay sameeyaan ay shan ka mid ah buuxin waayeen shuruudihi loo baahna ee farsamada, labada ha’ayadood ee kale ee hadhayna mid ka mid ay tahay ha’ayada sida joogtada ah hawshaasi uu qabanaysa takalena ay tahay mid heegan ah.
Labadan ha’ayadoodna bu yidhi xiligan xaadirka ah waxa ay ku hawlanyihiin hawsha ay ku kala saxeexanayaan heshiiska, dhawaanna la ogaan doono ha’ayada ku guulaysan doonta.
Mashruucan dhisidiisa wax soo saarka awooda oo la qorsheeyay in uu bilaabo soo saarida awooda sanadka 2022ka tirsiga reer yurub ayaa sida oo kale ku talo jira bu yidhi in u dhamaysto kala saxeexa heshiiskaasi sanadkan 2021ka.
Dhisida mashruucan geotermaalka ee tulu moojo ayaa waxa la filayaa in uu ku caawinayo wax soo saarka awooda elektriiga. Waana mid uumiga dhulka hoostiisa laga helo waxaana loo badali doona awooda elektiriiga oo lagu xidhiidhin doona khadka awooda elektriiga ee itoobiya.
Tulu moojo waxa uu ku dhax yaala deegaanka oromiya zoonka arsi dagmada toosa agagaarka etaya. Waxaana weeyaan mashaaricda dalka laga dhisayo si loo soo saaro awooda elktriiga mashruuci ugu waynaa.
Mashruuca awooda geotermaal si loo hawl galiyo waxa darasaad lagu sameeyay in ka badan 10 sano, labo sanadood ka hor ayaana la bilaabay qodista ceelasha si awooda looga soo saaro waana mashruuc hawshiisi la bilaabay.
Naziif waxa uu sheegay in mashruucan la bilaabay si loo qodo ceelasha sanadkii 2020 xiligan xaadirka ahna loo dhamays tiray qodista labo ceel oo soo saara awooda, ceelkii sadexaadna la bilaabay qodistiisa oo la qoday ilaa labo kun oo mitir.
Naziif waxa kale oo uu addis maleda uu sheegay in ceelkii ugu horeeyay ee la qoday u bilaaby in uumigu uu ka soo baxo.
Uumigan ka soo baxaya ceelkaasi awooda laga soo saari kara inta ay leegtahay ayaa waxa daraasaaad ku samaynaya xirfadlayaal dalalka dbadaha ka yimid, waxaana la suugaya natiijada ka soo bixi doonta. Sida uu hadalkiisa ku sheegay Naziif darasaadkani waxa u ka caawinaya ceelkani uumiga uu soo saarayo si awooda elektriiga loogu soo saaro, sida oo kale waxa lagu ogaanaya uumigani mudo intee leeg ayuu sida u yahay ku soconaya iyo awooda elektriiga meega bait intee leeg ayaa laga heli karaa. Waxa kale oo lagu ogaan kara buu yidhi daraasaadkan ceelasha kale xogta wax soo saarka awooda ee ay yeelan doonaan.
Geotermaalka tulu moojo waxa kale oo uu ku hawlan yahay dhisida wadooyinka, qodista ceelasha biyaha iyo hawlo kale.
Ha’ayadani ka ha’ayad ahaan waxa la asaasay sanadkii 2017kii tirsiga reer yurub, intii ay bilaawday darasaadkana waxa ka soo wareegtay 10 sanadood.
Si loo asaaso mashruucan wax soo saarka awooda elektriiga ee tulu moojo waxa ku baxaya lacag dhan 850 milyoon oo doolar. Waxaana uu mashruucani qodi doona 12 ceel oo soo saara uumiga loo isticmaalayo soo saarista awooda elektriiga.
Mashruucan tulu moojo ee geotermaalka ayaa ah ha’ayad soo saarta awooda korontada oo gaarka loo leeyahay, waana ha’ayadii ugu horeysay ee itoobiya ee gaarka loo leeyahay oo loo adeegsado uumiga dhulka hoostiisa ku jira in awood koronto laga soo saaro. sanadkii 2017kii waxaa ay ha’ayadu qoorshaysatay kuna hawlantahay in awooda korantada laga soo saaro oo dalkana looga faaiideeyo.
Waxa la sheegay in mashruuca geotermaal ee tulu moojo u yahay mashruuc laga wado dalka itoobiya oo soo saari kara awooda 50 meega wat oo marka gabi ahaan dhisidiisa la dhameeyo shanta sanadood ee soo socda qorshaha wareega labaad ee loo qorsheeyay u ku balaadhin doono in u soo saaro awood dhan 150 meega waat.
Total views : 6693070